Qaar ka mid ah fikradaha lagu sheegay war ka soo socda
January 10, 2010 by dalabyo 4 Comments
version The soo socda waxa uu ka mid ah qaar ka mid ah isbedel macno leh oo dhinaca macmiilka, inta badan waxaan u wareegeen loading asynchronous of our script iyo loading baahida of qabnay kale ee loo isticmaalo gudahood (sida UI jQuery, Google Translate API, Microsoft Translate API iyo kuwa kale).
Isbedelka waxaa loola jeedaa in xamuulka bogga badan ka dhaqso iyo waxa uu noqonayaa mid ka badan jawaab. Sidoo kale hangups la keena loading gaabis ah qabnay xisbiga saddexaad (sida mid ka mid ah sheegay in kutaan this) waa laga saarayaa.
sii daayo Tani waxay sidoo kale ka mid noqon kara update ah si ay u jQuery 1.4 taas oo uu leeyahay engine a dhakhso badan, iyo tan waxaa lagu qorshe ku sii daayo on January 14-, waxaan rajaynaynaa in ay sii daayaan 15-ka.
The-daayo pre waxaa hore u socda on this site, sidaa darteed haddii aad la kulanto wax dhib ah in bogagga turjumay, fadlan nala soo wargeliyaan.
Filed Under: Messages General Tagged Iyadoo: jQuery, uqaadineed xawaaraha